दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज १० गते शुक्रबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर २७ - Sutra TV Sutra TV
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज १० गते शुक्रबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर २७
मेष : रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्‍याउनेछ। परिवारको दायित्वलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंले लापरवाही गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। तपाईंको आज सबै काममा राम्रो हात पर्न सक्छ। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी के अर्थमा लिनुभएको छ भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
वृष : तपाईंले आज गरेका केही शारीरिक परिवर्तनहरूले तपाईको ढाँचामा पक्कै बृद्धि हुनेछ। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। नयाँ कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् र आफ्ना राम्रा मित्रहरूको मद्दत लिनुहोस्। आज तपाईंले आफ्ना साथीको अनुपस्थितिमा उनको खुशबू महसुस गर्नु हुनेछ। प्रतियोगिता आएको हुनाले कार्य तालिका व्यस्त हुनेछ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
मिथुन : तपाईंलाई केही मानसिक आघातको सामना गर्नु परेमा धेरै साहस र शक्तिको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो आशावादी मनोवृत्तिले सजिलै यिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। व्यस्त र तनाउपूर्ण यात्रा गर्नुहोस्, तर आर्थिक फाइदा भने होस्। आज आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु तपाईंको प्राथमिकता हुनुपर्छ। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। आफ्नो रिजुम पठाउन वा साक्षात्कारको लागि राम्रो दिन। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
कर्कट : कामको दबाब र असामंजस्यले घरमा केही तनाउ ल्याउन सक्छ। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। आकस्मिक परिचितहरूसँग आफ्ना व्यक्तिगत विषयहरू साझा नगर्नुहोस्। तपाईंले राम्रो व्यवहार गर्नु आवश्यक छ किनभने तपाईंको प्रेमी धेरै अप्रत्याशित मुडमा हुनेछ। तपाईंले प्रदान गर्न सक्नुहुने निश्चित नभएसम्म केहि प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
सिंह : आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्। सेक्सको इच्छित परिणाम पाउनु हुनेछ। कसैको लागि व्यापार र शिक्षा लाभ हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईंलाईले आफ्नो जोडीसित पुराना रमाइला रोमान्टिक दिनहरूको आज फेरि कदर गर्नु हुनेछ।
कन्या : स्वास्थ्यलाई लिएर यो समय नीरस रहनेछ, त्यसैले तपाईं खाने कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। परिवारको गोप्य समाचारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। तपाईंको प्रेमीले बहिस्कार गरिनाले तपाईंको अनमोल उपहार र इनामले पनि खुशीयाली ल्याउन सक्दैन। साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। तपाईं साँच्चै नै आज लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने, अरूले दिएको सल्लाह सुन्नुहोस्। तपाईंको जोडीलाई तपाईंको पुरानो गोप्य कुरा थाहा लाग्नाले केही चोट पर्न सक्छ।
तुला : तपाईंले आज बसेर आराम गर्नु आवश्यक छ, तपाईंलाई सबैभन्दा मन पर्ने सोख र आनन्दका कुराहरूमा संलग्न हुनुहोस्। आर्थिक सुधार निश्चित छ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। मायामा डुब्नु आज तपाईंको लागि पाप हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्। लेखक र मिडिया व्यक्तिहरूले राम्रो पहिचान बनाउने विषयमा सोच्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईं किराना मालको किनमेल गर्दा आफ्नो जोडीसित रिसाउन सक्नु हुन्छ।
वृश्चिक : सदैव युवाको रहस्य भएको हुनाले खेलको लागि केही तिर्ने गर्नुहोस्। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। आमाबाबु र मित्रले तपाईंलाई खुसी राख्न आफुले सकेसम्म गर्नेछन्। आजको दिन खुशी र आनन्दले भरिएको सुंदर सन्देशले भरिएको छ। स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनावपूर्ण हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
धनु : आफैलाई सुहाउँदो र राम्रो राख्न बढी क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस्। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। आफ्ना आउने पीढीको लागि विशेष केहि योजना गर्नहोस्। तपाईंले तिनीहरूले हासिल र कार्यान्वयन गर्न सकून् भनेर केही व्यावहारिक योजना निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको आउने पुस्ताले तपाईंलाई यस उपहारको लागि सधैं सम्झना गर्नेछ। तपाईंले केही प्रेम बाँडेमा, तपाईंकी प्रियतमा आज तपाईंको लागि एउटा दूतको रूपमा परिणत हुनेछिन्। सह-कार्यकर्ता र अघीनस्तहरूले चिन्ता र तनाउ ल्याउनेछन्। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन्, जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। धेरै विषयहरूमा धेरै असहमति हुन सक्ने हुनाले यो दिन तपाईंको लागि धेरै राम्रो हुने छैन। यसले तपाईंको सम्बन्ध कमजोर बनाउनेछ।
मकर : तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या भएकोले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमा जान असमर्थ हुनाले केही बाधाहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर आफुलाई यसबाट छुटाउन आफ्नो तर्कको प्रयोग गर्नुहोस्। बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ, त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। परिवार सजिलै चल्ने देखिन्छ र तपाईंले आफ्नो योजनामा पूर्ण सहयोगको आशा गर्न सक्नुहुनेछ। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ। तपाईं धेरै दिनदेखि काममा संघर्ष गरिरहनु भएको थियो भने, यो एउटा राम्रो दिन हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन ? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
कुम्भ : डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। तपाईंले धेरै अनपेक्षित स्रोतहरूको मार्फत कमाउने सम्भावना छ। तपाईंका छोराछोरीहरूले तपाईंलाई खुसी राख्न सकेसम्म गर्नेछन्। प्रेम र रोमान्सले तपाईंलाई आनन्दित मुडमा राख्ने थिए। उद्योग गर्ने मान्छेसँग साझेदारीमा उद्यम गर्नुहोस्। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आज तपाईंका वैवाहिक जीवन मामलाका कुराहरू साँच्चै रमाइला हुनेछन्।
मीन : परिवारका केही सदस्यहरूले आफ्नो डाही व्यवहारले तपाईंलाई रीस उठाउन सक्छन्। तर आफ्नो स्वभाव गुमाउने कुनै आवश्यकता छैन अन्यथा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। जे निको हुन सक्दैन त्यसलाई सहनु पर्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। वित्तमा निश्चित बढोत्तरी हुनेछ, तर त्यही समयमा व्ययमा पनि वृद्धि हुनेछ। साँझको सामाजिक गतिविधि तपाईंले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ। प्रेममा आफ्नो अशिष्ट व्यवहारको लागि क्षमा याचना गर्नुहोस्। प्रमुख व्यापार सम्झौतामा बातचीत गर्दा आफ्नो भावना नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। आज काममा घरेलु मद्दत आउने छैन जसले तपाईंका जीवनसाथीलाई तनाउमा पार्न सक्छ।
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज ३० गते बिहीबार, ई.सं. २०१९ अक्टूबर १७
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज २९ गते बुधबार, ई.सं. २०१९ अक्टूबर १६
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज २८ गते मंगलबार, ई.सं. २०१९ अक्टूबर १५
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज १३ गते सोमबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ३०
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज १२ गते आइतबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर २९
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज ९ गते बिहीबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर २६